Sababta aysan Trump waligood u dayrin doonin taageeriyaashiisa? | Caasimada Online
Waxaa jiray warar la’isla dhexmarayay oo sheegayay in ay hoos u dhacday taageeradii badnayd ee loo hayay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump , gaar ahaan taageeradii xisbiga Jamhuuriga ee uu ka tirsanyahay, balse taasi ma muuqato.
Marka waxan oo dhan la’isu geeyo, waxa aad fahmi kartaa sababta hadalada Trump ee uu ku dhaleecaynayo saxaafadda ay u noqdaan hadalo siyaasadeed oo saamayntooda badantahay.
“Trump waa nin fahmaya in Amerika ay u baahantahay edaab iyo kala dambayn, uma baahnin koox rag ah oo ay surwaalaha ka dhacayaan oo dariiqyada wareegaya” ayuu yiri
Waxaan weeydiinay in uu ka niyad jabayo Trump haddii uusan kasoo dhalaalin balanqaadyadiisii ololaha doorashada, su’aashaas oo uu ‘maya’ kaga jawaabay, wuxuuna u hayaa sedex sababood.
Xusuuso bishii Janaayo 2016-kii markii uu Trump yiri “Aniga oo taagan wadada bartankeeda ayaan toogan karaa qof, mana luminayo dad ii codeeya”.